Indima yabankulunkulukazi - Abazali bakaNkulunkulu baba yizingane
Kukhona amasiko ahlukene kunkulunkulukazi
Kungabalulekile ukuhola ingxoxo ecacile noNkulunkulu oyifunayo
Lapho ingane iseduze ukubhapathizwa, kubalulekile ukuthola u-godfather. Lokhu kuzoba ngumuntu osondelene kakhulu nabazali. Kodwa yikuphi okulindelwe noma izibopho, yiziphi izindima nemisebenzi ezixhunywe kubanikazi bomama?
U-godfather uhambisane nomntwana ekubhapathizweni enombono ongokwenkolo, ethatha umthwalo wemfanelo wokuthi ingane ifunda ukholo ngokwayo futhi ifunda ukuhlala.
Kuze kube unyaka we-1983, ukuxhaswa esontweni kwakumele ubuhlobo obungokomoya. Igama elithi godfather livela esiLatini futhi lisho into efana "noyise".
Ebandleni lamaKatolika namaProthestani, izimo zokuxhaswa zihlukile.
Lokhu kungaba ukuklama kokuhlelekile, ukuklanywa kwekhandlela lokubhapathiza, iBhayibheli lezingane njengesipho noma isifiso somuntu siqu noma isithembiso sokuphila, esibhalwe phansi. Kwezinye izindawo kungokwemvelo ukuba izingane zilethe u-godfather umuthi wesihlahla samasundu ngeSonto lePalm elihlotshiswe kahle futhi libusiswe esontweni. Usuku lokubhapathizwa lungaba isizathu somhlangano njalo ngonyaka ukukhumbula ubhapathizo nesithembiso.
Namuhla, noma kunjalo, ukuhambisana nokwenkolo okungokwenkolo kwabankulunkulu bobuhlengikazi kuye kwahamba kancane kancane
Kufunwa umxhasi ukuhamba nokuthuthukiswa komuntu siqu nokusiza umzali ezindabeni zemfundo. Ngezinye izikhathi uxhasomali lukhawulelwe ekupholiseni ngezikhathi ezinzima.
Abazali bakaNkulunkulu kufanele balwele ukwakha ubuhlobo bomuntu siqu nonkulunkulu futhi babe khona njengomeluleki noma umlamuleli phakathi kwabazali. Esikhathini esidlule, onkulunkulukazi babenomsebenzi wokunakekela uma kwenzeka abazali babo befa. Noma kunjalo, ukuxhaswa akuhlobene nokulondoloza. Uma abazali befisa, lokhu kungenziwa kunqunywe ngentando.
Yiziphi izilindelo, izifiso nezibophezelo kubaninikazi bomama? Lokhu kusindisa ukudumazeka ezinhlangothini zombili. Esimweni esihle kakhulu, ubuhlobo bokuthembela buba phakathi kwengane kanye Patelokho kungadlulela iminyaka. Ngesinye isikhathi, abazali abakwazi ukuba yizinzalamizi ngokwabo, kodwa ugogo nomkhulu. Futhi izingane zakubo noma abangane abahle kakhulu bakhethwa ngenjabulo. Kubalulekile ukuthi ukwazi ukwakha komunye nomunye ngokwemigomo yamagugu nemfundo.
Lahla izinkinga emuva
Yiba Influencer - eBook for Free